Site na: KongoLisolona: July 27, 2019 00: 00 Enweghị asịsa
Echere otu n'ime ụmụ nwanyị na-abụ abụ kacha ukwuu nke jazz maara. Yana Ella Fitzgerald, Nina Simone na Sarah Vaughan, o bu otu n’ime ndi nnochite anya nke nkpu jazz.
Eleanora harris Fagan amuru na 1915, nne ya, Sarah Julia "Sadie" Harris bụ onye a na-akpọ Sadie Fagan (aha nna nna ya) nke agbụrụ Irish, 13, na nna ya, Clarence Holiday, 15, ọkachamara n'ịgba egwu.
Womenmụ nwanyị na-enye onwe ha dị ka ndị a tara ahụhụ na ebe ịchụ aja nke okpukpe: na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na chọọchị niile, ụmụ nwanyị ka n'ọnụ ọgụgụ, ọ bụ ihe nwute na otu ụlọ ụka ndị pseudo (ụka ndị a bụ "ndị ikom nke Chukwu" ndị na-akparị ụka) , ha na-arụkarị ọrụ
Ọkt30 02: 59
Hi / le: 6/3 ℃
Hi / le: 10/3 ℃
Ọnọdụ ọ bụla na-adịghị mma nke na-adakwasị anyị ọ sitere na uche Chineke n'Izrel? Ndị ojii / ndị Africa na ọkachasị ndị Congo jụrụ ihe niile na-adabaghị na Chineke nke Israel; otù bu ob pooreye: ọ bu uche Chineke Israel; onye nwuru ọ bu uche Chineke Israel; a cataclysm itịbe: ọ bụ uche Chineke nke Israel; anyị na-alụ agha: ọ bụ uche Chineke n’Izrel; ayi nāria ọria: ọ bu uche Chineke Israel; otu bụ ohu: ọ bụ uche Chineke nke Israel (...)
Ọktoba 29, 2020 15: 33